Umgaqo-nkqubo wokubuyiselwa kwemali - Popular Jewelry
Ukuhambisa ngenqanawe kwasekhaya (eMelika)
Yonwabela ukuhanjiswa okuqhelekileyo okuhanjiswa ekhaya (i-USPS yokuqala iklasi) ngee-odola ezi- $ 100 okanye ngaphezulu.
Ulwazi lokuHamba ngokubanzi
Nceda uvumele iintsuku zeshishini ezi-3-5 ukulungiselela uku-odolwa nokuqinisekiswa. Vumela iintsuku ezongeziweyo zeentsuku ezingama-7 zokuhanjiswa kwekhaya.
Asinoxanduva nakuphi na ukuphulukana nezinto ezilahlekileyo, ezibiweyo, okanye ezonakeleyo. Zonke izinto ezithunyelwayo zi-inshurensi kwaye umthengi uthatha uxanduva lwamabango enziwe kulowo uphethe ukuthutha.
Ngezizathu zokhuseleko, sinokuthumela kuphela kwidilesi ebonelelweyo ekuphumeni.
Ngenxa yezizathu zokhuseleko, asinakuyibamba iphakheji okanye sitshintshe ukuhanjiswa kwayo xa sele inikezelwe kumphathi. Ukuba ufuna ukutshintsha nayiphi na ingcaciso ye-odolo (ukuhambisa / idilesi yokuhlawula, ulwazi lokuhlawula, njl. ngokukhawuleza info@popular.jew jewelry. Ukuba i-odolo yakho irhoxisiwe ngempumelelo, unokufaka i-odolo entsha ehlaziyiweyo.
Buyisela (KWI-INTANETHI KUPHELA)
Umgaqo-nkqubo wethu uhlala kwiintsuku ezili-15 emva komhla wokuthunyelwa. Ukuba iintsuku ezili-15 zidlulile oko sithumele ipakeji yakho, asinakho ukubuyisela imali okanye sitshintshisane.
Iziqwenga zesiko ezinjengee-nameplates, amakhonkco egama, kunye namazinyo njl njl. Azibuyiswa kwaye azizukubakhona ukuba zisetyenziswe njengetyala levenkile. Ukutshintshwa kobuntu kunye nokutshintsha (oko kukuthi, ukukrolwa kwisacholo; itsheyini yokumisa kwakhona) kwisiqwengana nayo iya kuwuphulukanisa nomgaqo-nkqubo wokubuya. Siya kukwazisa ngaphambi kwexesha lokuthenga ukuba into ethile yahlulwe ngokwendlela.
Izinto ezibuyisiweyo zixhomekeke kumrhumo wokubuyisela kwakhona we-15% oza kutsalwa kwimbuyiselo. Iindleko zokuthumela ngenqanawa azibuyiswa.
Ukulungela ukubuya, into yakho mayingasetyenziswa kwaye ikwimeko efanayo naleyo ubuyifumene kuyo. Ukupakishwa koqobo kunye nazo naziphi na iziqwenga zokuncoma (ukuba kufanelekile) mazifakwe.
Imbuyiselo (ukuba kuyangena)
Nje ukuba ukubuya kwakho kufunyenwe kwaye kuhlolwe, siya kukuthumela i-imeyile ukukwazisa ukuba siyifumene into. Siza kukwazisa ngokuvuma okanye ukwaliwa kwembuyekezo yakho.
Kanye Imbuyekezo yakho yamkelwe, imali yakho iyakubuyiswa kwaye ikhredithi izakusetyenziswa ngokuzenzekelayo kwindlela yakho yoqobo yokuhlawula. Nceda uvumele iintsuku ezimbalwa ukuba zibuyiselwe imali.
Ukubuyiswa kwexesha elide okanye elingekho (ukuba kuyangena)
Ukuba awukayifumani imbuyekezo kwisithuba seveki yokufumana isiqinisekiso sokubuyiselwa kwemali, nceda unxibelelane nebhanki yakho kunye nenkampani yamakhadi etyala / PayPal. Ukuqhubekeka kwexesha lokubuyiselwa kwemali kunokubude; kungathatha ixesha ngaphambi kokuba imali yakho ithunyelwe.
Ukuba uyilandele le nkqubo kwaye awukaziswanga ngayo okanye ubuyifumene imbuyiselo yakho, nceda uqhakamshelane nathi apha adjew jewelrycorp@gmail.com.
Izinto ezithengiswayo (ukuba kuyangena)
Izinto kuphela ezithengiweyo ngexabiso levenkile eliqhelekileyo ezinokubuyiswa. Izinto ezithengiswayo azinakubuyiselwa.
tshintshano (ukuba kuyangena)
Sibuyisela izinto kuphela xa zinesiphene okanye zonakele. Ukuba ufuna ukubuyiselwa ngokuthe ngqo, thumela i-imeyile info@popular.jew jewelry kwaye uthumele into yakho kuyo 255B Isitrato somsele New York, New York US 10013. Utshintshiselwano aluxhomekekanga kwimali yokubuyiselwa imali eyi-15%.
Ukuba loo nto iphawulwe njengesipho xa sithengiwe kwaye sithunyelwa ngqo kuwe, uyakufumana ikhredithi epheleleyo ngexabiso lembuyekezo. Nje ukuba into ibuyisiwe ifunyenwe, isatifikethi sezipho siya kuthunyelwa nge-imeyile.
Ukuba loo nto ayikhange ibhalwe njengesipho ngexesha lokuthenga, okanye ukuba umninimzi unike i-odolo ethunyelwe kuye ukuba ayokuhambisa kuwe, siya kuthumela imbuyekezo kulowo uphetheyo kwaye uya kuba noxanduva lokuphatha isatifikethi setyala / sezipho.
Ukubuyisa imveliso yakho, nceda unxibelelane nathi ku- info@popular.jew jewelry ngenombolo yeodolo kunye ne- "RETURN" kwisifundo. Nangona kungekho mfuneko ungabandakanya nesizathu sokubuya (sizama ukuphucula inkonzo yethu kwaye ingxelo yamkelekile!)
Nje ukuba ukubuya kwamkelwe, thumela ukubuyela kule dilesi ilandelayo:
I-255 Icandelo lomsele waseCan B
INew York eNew York i-US10013.
Uya kuba noxanduva lokuhlawula iindleko ezongezelelekileyo zembuyekezo. Iindleko zokuhambisa ngexesha lokuthenga azibuyiswa (ukuba imali yokuposa ibixhaswe ngendlela yethu yasimahla yokuthumela le ndleko zihlala zingabonakali kuwe; umxhasi uya kwaziswa ngociphiso ngaphambi kokubuyiselwa imali.)
Ukuba sikunika ilebhile yokuthumela, iindleko zokuhambisa ngenqanawa ziya kuncitshiswa kwimbuyekezo yakho.
Ixesha elithathayo lokubuyiselwa kwemali / lokutshintshiselana ngezinto luyahluka ngokuhambelana nendawo okuyo. Siza kukubonelela ngolwazi lokulandela umkhondo ngexesha lokuhambisa (ngesiqhelo nge-imeyile) ukuba kunokwenzeka.
Ukuba uthumela into exabisa ngaphezulu kwe- $ 50 qwalasela ukusebenzisa umkhondo wokuhambisa umkhondo kunye nokuthenga i-inshurensi kwiphakheji yakho. Asinakuqinisekisa ukuba siyakufumana ukubuya kwakho. Unokucela ukuba sinikeze ileyibhile nge-inshurensi (jonga apha ngentla xa kutsalelwa imali yokuposa kwintlawulo yakho.)